Inona no Dikan’ny hoe Ateraka Indray? Inona no Lazain’ny Baiboly?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Ga Goun Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kikaonde Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Pangasinan Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Sinoa (Shanghaï) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tenin’ny Tanana Kolombianina Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Turkmène Télougou Venda Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
“Ateraka indray” ny olona rehefa lasa manana fiainam-baovao, satria miova ny fifandraisany amin’Andriamanitra. (Jaona 3:3, 7) Atsangan’Andriamanitra ho zanany mantsy izy. (Romanina 8:15, 16; Galatianina 4:5; 1 Jaona 3:1) Toy ny zaza natsangana ara-dalàna izy, ka lasa anisan’ny fianakavian’Andriamanitra.—2 Korintianina 6:18.
Hoy i Jesosy: “Tsy afaka mahita ny fanjakan’Andriamanitra ny olona raha tsy ateraka indray.” (Jaona 3:3) Ateraka indray àry ny olona iray mba ho vonona hiara-manjaka amin’i Kristy ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra. Avy any an-danitra io Fanjakana io no mitondra. Toy ny hoe nomena lova “voatahiry any an-danitra” àry ny olona ‘ateraka indray.’ (1 Petera 1:3, 4) Lasa matoky tanteraka izy fa “ho mpanjaka hiara-mitondra” amin’i Kristy.—2 Timoty 2:12; 2 Korintianina 1:21, 22.
Rahoviana ny olona iray no ateraka indray?
Nanazava i Jesosy fa “ateraky ny rano sy ny fanahy” ny olona ateraka indray. (Jaona 3:5) Midika izany fa atao batisa ao anaty rano aloha ilay olona, dia avy eo atao batisa amin’ny fanahy masina.—Asan’ny Apostoly 1:5; 2:1-4.
I Jesosy no olona voalohany nateraka indray. Natao batisa tao amin’ny Reniranon’i Jordana izy, ary avy eo nohosoran’Andriamanitra (na nataony batisa) tamin’ny fanahy masina. Lasa zanak’Andriamanitra ara-panahy àry izy, ka afaka nanantena ny hiaina any an-danitra indray. (Marka 1:9-11) Tanteraka izany rehefa natsangan’Andriamanitra tamin’ny maty izy, ka lasa zavaboary ara-panahy.—Asan’ny Apostoly 13:33.
Atao batisa ao anaty rano koa ny olona ateraka indray vao hosorana amin’ny fanahy masina. * (Asan’ny Apostoly 2:38, 41) Lasa mahazo antoka izy hoe hiaina any an-danitra. Tanteraka izany rehefa atsangan’Andriamanitra amin’ny maty izy.—1 Korintianina 15:42-49.
Hevi-diso momba ny atao hoe ateraka indray
Hevi-diso: Tsy maintsy ateraka indray ny olona vao voavonjy na vao azo ekena ho Kristianina.
Marina: Tsy ireo ateraka indray, izay hiara-manjaka amin’i Kristy any an-danitra, ihany no ho voavonjy noho ny soron’i Kristy, fa ireo Kristianina hiaina eto an-tany koa. (1 Jaona 2:1, 2; Apokalypsy 5:9, 10) Vahoakan’ny Fanjakan’Andriamanitra izy ireo, ary manantena ny hiaina mandrakizay ao amin’ny tany paradisa.—Salamo 37:29; Matio 6:9, 10; Apokalypsy 21:1-5.
Hevi-diso: Safidin’ny olona iray ny hoe ateraka indray izy na tsia.
Marina: Afaka mifandray amin’Andriamanitra ny olona rehetra, sady afaka ny ho voavonjy daholo. (1 Timoty 2:3, 4; Jakoba 4:8) Andriamanitra ihany anefa no mifidy hoe iza no hateraka indray, na hosorany amin’ny fanahy masina. Milaza ny Baiboly fa ‘miankina amin’Andriamanitra’ no mahatonga ny olona hateraka indray, fa “tsy miankina amin’izay maniry na amin’izay mihazakazaka.” (Romanina 9:16) Azo adika hoe “ateraka avy any ambony” koa ny hoe “ateraka indray.” (Jaona 3:3, fanamarihana ambany pejy, Fandikan-teny Protestanta) Vao mainka izany manaporofo fa “avy any ambony” na avy amin’Andriamanitra ny fifidianana an’ilay olona.
^ feh. 5 Ny an’i Kornelio sy ireo olona niaraka taminy ihany no hafa.—Asan’ny Apostoly 10:44-48.
Hizara Hizara Inona no Dikan’ny hoe Ateraka Indray?
ijwbq no. 107